Motorcycle tubeless taya, ọgba tum tum tubeless taya - Safeway Taia
Deep ụkpụrụ, nnukwu ụkpụrụ ngọngọ imewe, nke mere na taya nwere ike gaa na akaụntụ a ụfọdụ cross-mba arụmọrụ, ma na pavement ụzọ ịnya ụgbọ, ire ụtọ ụkpụrụ okporo mmiri na mbara ọwara mmiri, ike hụ taya nnọọ mma drainage arụmọrụ.
Skuuta Taia SF221
Devil Nlereanya Stabilization, nchekwa, antiskid, drainage, inogide painiapulu Design, 6PR.
Atụmatụ mechie & ogologo ubu profaịlụ High Performance onyinye More ịkpụ-n'ọnụ Multiple cross n'elu uzo Uru Ezigbo traction Better cornering Elu mmiri braking Better adịgide
Ikeegwuregwu, directional ụkpụrụ na-enye ihe niile na-gburugburu kpọọrọ ìgwè ma welie cornering kraiptographi angled grooves enyemaka mmiri arụmọrụ Front na azụ nha dị.
Tricycle Taia SD026
Atụmatụ All wheel 5 ọgịrịga zọcha ụkpụrụ Uru Ezigbo agbara firmer ụzọ adịgide
Safeway Taia emi odude ke Zhucheng City, Shandong Province, China. Guzosie Ike na afọ 2010, anyị na-na-elekwasị anya na mmepụta nke First Class Motorcycle taya na Tubes. Full àmà na Premium quality-eme ka anyị na-ekpori ndụ aha ọma na ndị ahịa na n'oge gara aga afọ ole na ole.
Ọhụrụ ozi ọma BANYERE SAFEWAY
Anyị Na 121th (Spring, 2018) China Canton Fair
Na 2018 April 15th-19 anyị na-aga Canton mma na Guangzhou. Welcome enyi n'ụlọ na mba ọzọ na-eleta anyị na-ekwu okwu azụ ahịa ga-eme n'ọdịnihu.
Anyị Na 77 (Spring, 2019) China Motorcycle Parts Fair
Anyị Na 76th (mgbụsị akwụkwọ, 2018) China Motorcycle Parts Fair
Street Bike taya , Moto Cross Taia , Motorcycle Natural tube 4.10-18 , Cross ọgba tum tum na Taya , Motorcycle Cross Taia , Oem Motorbike Tyre,